Lumka ngokuLayisha uPhalo oluPhicothiweyo lukaGoogle | Martech Zone
Lumka ngokuLayisha iZikripthi zikaGoogle ezininzi
NgoLwesibini, Oktobha 2, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ngokudityaniswa okuninzi kwezixhobo kwiinkqubo ezininzi zolawulo lomxholo, sibona uninzi lwabathengi bethu benemicimbi ngezikripthi zikaGoogle ezifakwa kwiphepha elininzi amaxesha. Oku kubangela umonakalo kwi kubahlalutyi, kukhokelela ekunikeni ingxelo enkulu kubakhenkethi, amaphepha kutyelelo ngalunye kwaye kungabikho nqanaba libizayo.
Ngale mini nje sinomthengi obeneeplagi ezi-2 ezilayishiwe kwaye zilungiselelwe ukongeza isicatshulwa seGoogle Analytics kwibhlog yabo. Kwaye ayisijongi iplagi ukukhangela ukuba ngaba sele ikho into ebhaliweyo! Iziphumo zokuba utyelelo luxelwe ngaphezulu kwaye ireyithi yabo yokuhlawula ibimalunga ne-3%. Ukuba ireyithi yakho yokuhla ibuye iye ngaphantsi kwe-5%, qiniseka ukuba unengxaki ngezikripthi ezininzi kwiphepha lakho.
Ngaphandle kohlalutyo, ungazi njani ukuba uyenzile le nto? Enye indlela kukujonga nje umthombo wephepha lakho kunye nokukhangela j.js. Nokuba ufuna ukubeka esweni isiza nge iiakhawunti ezininzi zikaGoogle, Kuya kubakho iskripthi esinye kuphela.
Enye indlela kukuvula izixhobo zakho zokuphucula kwisikhangeli sakho kwaye ujonge unxibelelwano lwenethiwekhi emva kokuba uhlaziye iphepha. Uyabona ukuba iskripthi se-ga.js sicelwa ngaphezulu kwesinye?
I-Google Analytics isebenza ngokulayisha iskripthi esihlanganisa lonke ulwazi, sigcina ulwazi kwi-cookies zebrawuza kwaye siyithumele kwiiseva zikaGoogle ngesicelo somfanekiso. Xa iskripthi silayishwe ngaphezulu kwesinye, ngamanye amaxesha sibhala ngaphezulu ii-cookies, kwaye sithumele izicelo ezininzi zemifanekiso kwiseva. Kungenxa yoko le nto izinga lokuhlawula isezantsi kakhulu… ukuba undwendwela iphepha elingaphezulu kwesinye kwisiza, awuyi kubhampa. Ke… ukuba izikripthi zisebenza ngaphezulu kwesinye xa undwendwela iphepha elinye, oko kuthetha ukuba undwendwele amaphepha amaninzi.
Jonga iphepha lakho kunye nelakho kubahlalutyi Ukuqinisekisa eyakho kubahlalutyi Iskripthi sifakwe ngokufanelekileyo kwindawo yakho, kwaye uqiniseke ukuba awulayishi ngengozi iscript ngaphezulu kwesinye. Ukuba uyayenza, idatha yakho ayichanekanga.
tags: izinga lokuhlawulagaj.jsi-google analytics
Ngaba iAdobe SiteCatalyst yokulahleka kweStam?
UGoogle uvula uMphathi weThegi kaGoogle
Okt 3, 2012 ngexesha 3:32 AM
Enkosi, ndiza kuqaphela oku. Ndicinga ukuba esi sesona sizathu sokuba indawo yam ye-ecommerce ingenayo i-traffic ngokwenene kwingxelo yayo yohlalutyo. iskripthi sikagoogle sahlukile kwikhowudi yokulandelela ekhoyo kwingxelo yayo ye-google analytics. enkosi ntanga.
Nov 14, 2013 ngo-6:21 AM
Molo Douglas, ingcebiso enkulu. Ndibe nokwehla okufanayo okoko ndiqale imifuniselo ethile kuMphathi weThegi kaGoogle kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo: Iphepha le-4 / uNdwendwelo 🙂 kwaye ubuye umva ngoku kwi-0.47% 😀
Ukulandela iposi yakho, nantsi isiphumo sam:
I-1.Scripts: Kukho i-1 ga.js (ndinamathisele kuphela ikhowudi ye-Analytics kunye neTag Manager kwindawo yam). Andiboni kwiscript sesibini (uMphathi weTag) nayiphi na ireferensi kwi-ga.js kodwa gtm.js kuphela. Andinayo ikhowudi enkulu nje ezo zi-2 zincamathiselwe kunye (uhlalutyo lokuqala, emva koko TM), ke andidingi kusebenzisa isicelo, nangona kunjalo ndiye ndajonga nge-firebug nayo.
2. Kumphathi weTag Console Ndenze isiganeko esinye (ixesha elifanayo lokudala, ixesha elifanayo lokuqalisa ukulahla). Esi siganeko sisebenza ngokusisiseko njengeNxibelelaniso yokucofa umphulaphuli kwii-Outbound Links kwaye iyafana nale icetyiswa nguJames Cutroni kwibhlog yakhe. Kodwa ndenze uhlengahlengiso oluncinci: Enye yi-Non-Interaction Hit iseti ukuya kwiNyaniso (ekungafanelanga ibethwe ngezinga lokutsiba?) kodwa ke ndongeze iLabel=referrer endaweni yokuyishiya ingenanto, kuba bendifuna ukwazi apho unqakrazo. suka phi. (Nangona kunjalo ndiyisusile namhlanje ayiloncedo njengoko bendicinga)
3. Ndisenawo amakhonkco ambalwa aphumayo anondala onClick="_gaq.push()” engeneyo kodwa zonke zisetiwe ukucofa iNon-interaction to True.